IQonga laseLatin American Geospatial - iGeofumadas
Iforam ye-Latin American Geospatial Forum
Umhla womsitho obhengezwe kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo nalapho sibheja impumelelo ebalulekileyo usondele kakhulu. Sibhekisa kwiForam yokuqala yeLatin America Geospatial, eza kubanjelwa eBrazil phantsi komxholo othiUkuzisa iingcamango zomhlaba kwizenzo zendawo".
Umqondiso omkhulu wento sonke esiyilindeleyo kweli lizwe njengamandla avelayo esabelana naye imeko efanayo. Nangona sahlukile ngokwamazwi, siyazi ukuba indawo apho iBrazil ithatha indawo yayo iyenza ibe yindawo yokuphuhlisa enefuthe phantse kwangoko kwicandelo laseLatin America, kwaye lo msitho uchanekile ngenxa yesidingo esinyanzelekileyo saseBrazil sokwenza Nyusa.
Lo msitho ijonge ukwenza zibonakale imigudu ukuba ngamnye kuthi enze kwiindawo zethu, nokuba indlela academic, umxholo isicelo yoluntu okanye yabucala kodwa izenzo edibeneyo kufuneka ukuba negalelo kwimingeni zehlabathi yelifa lethu ukuba izizukulwana ezizayo.
Siyathemba ukuba ngenxa yalo msitho, sinokubona ngaphaya kwamanyathelo okwenziwa kobuchule beSpanishi, imeko ngokubanzi yemeko ye-geospatial njengamandla asele eyekile ukubonwa njengeemephu ezipeyintiweyo kwaye ngokuthe ngcembe yamkelwa njengesixhobo ukwenza isigqibo. Kukwalindeleke ukuba ukudibana kwamacandelo ahlukeneyo eli lizwekazi kuncede ekukhuthazeni uzinzo lwendalo esixhamla kuyo sonke, iinkampani ezibonelela ngezixhobo kunye nabavelisi beemveliso, ababoneleli beenkonzo kunye namaziko anxulumene nezemfundo kunye norhulumente.
Lo msitho uza kubanjelwa eRio de Janeiro, ukusukela nge-17 ukuya kwi-19 ka-Agasti, ngo-2011. Umsitho uphakanyiswa ngu Uphuhliso lweGIS, Umbutho zabavakalisa GeoIntelligence kunye Geospatial World yaye phantse 10 iziganeko ezifana oku kwiingingqi ezahlukeneyo zehlabathi, kule meko exhasa Institutes Brasileiro de Geografia / Estatística kunye Pereira Passos.
Ukongeza iinkampani ukuxhasa isiganeko njengoko nabaxhasi, kuquka AutoDesk, Bentley, Trimble, Digital Globe, Hexagon, phakathi kwabanye.
Njengoko bekulindelekile, iqonga libandakanya uthotho lweesemina, iipuniyali, iisimpoziya, iiseshoni zobugcisa, kunye nemiboniso. Abanye bababonisi kunye nabathathi-nxaxheba kwiindawo ezahlukeneyo zomsitho bazisiwe kwiwebhusayithi, ebandakanya abantu abathathe inxaxheba ebonakalayo kumazwe aseMelika naseYurophu.
Asikhange siyibone i-ajenda ecacileyo, kodwa isishiya sinomdla ngendima eza kudlalwa ngamalinge e-OpenSource, athetha kakhulu. Ukuba ngumsitho ongenamkhethe kunye nokuvuleleka phakathi koluntu kunye nabucala, ngokuqinisekileyo siya kubona amava ngemixube efanele ukuxabiswa. Kananjalo ukuba kuthathelwa ingqalelo ukuba imibutho efana gita, OGC y I-CP-IDEA.
Siyazi kananjalo ukuba, njengomsebenzi wokuqala, iya kuseka izikhokelo ezizelwe kwimiboniso, iingcebiso kunye neendlela eziboniswayo emva komsitho. Ngenxa yokufundwa kwakhona, ngokuqinisekileyo siya kubona isidingo sokwanda okukhulu kwicandelo laseSpanishi, ukuthintela ukuthambeka okunokwenzeka kwiimodeli ezahlukeneyo zeshishini kwaye ngokuqinisekileyo inguqulelo kwiSpanish ithathela ingqalelo ukuba lulwimi lweenkobe kwinxalenye enkulu yabaphulaphuli ejolise kuyo. .
IiGrade zoBugcisa zeGeospatial
Ukongeza, umsitho ubandakanya ukunikezelwa kwamanyathelo angawona amatsha kwizinto ezintsha, ukulungiswa kwakhona okanye ukumiliselwa kwetekhnoloji kwindawo ye-geospatial ngokubaluleka kweLatin America. Nangona kungekho zindidi okanye imigaqo yovavanyo enikiweyo okwangoku, singacinga ukuba siza kubona izindululo ezixabisekileyo kwiindawo ezinje ngezoLimo, ubuNtlola boShishino, ezothutho, iMigodi, amandla, uRhulumente, ii-IDEs, oovimba bendalo kunye nocwangciso lokusetyenziswa komhlaba.
Okwangoku, banokutyunjwa kwesi sixhobo. Sicebisa ukuba zonke iinkampani kunye namaziko karhulumente acebise iinzame zawo, njengoko inkqubo yazo kunye nokusasazwa kwazo kuqinisekisa uzinzo lwemodeli yeshishini lokuma komhlaba kwimeko yethu, esiqinisekileyo ukuba inokubonisa umhlaba.
Bona ezinye ze ILatin America yeGosa leGeati
Post edlulileyo«Ngaphambilini Iingcebiso zokuqhelanisa nekhibhodi ebonakalayo ye-Ipad
Post Next Imephu yokuqonda imbonakalo yomhlaba: UJuan Nuñez GiradoOkulandelayo »